Ukuhamba usuka eParis uye eAmsterdam NguLoliwe ku 3 iiyure | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukuhamba usuka eParis uye eAmsterdam NguLoliwe ku 3 iiyure
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 14/05/2020)
Yinyaniso ukuba kukho ngaphezu kwesinye indlela yokufikelela Amsterdam ukususela eParis. Yaye ngoxa bonke beze kunye pro babo bendlela, yokuhamba ukusuka eParis eAmsterdam ngololiwe uhlala ukhetho best xa ukwenza uthelekiso. Siya kukunika zonke izizathu zokuba zokuhamba train kufuneka ibe ukhetho lwakho lokuqala, ingakumbi xa ufuna ukufika Amsterdam eParis ngokukhuselekileyo kunye isimbo kunye nentuthuzelo.
EParis Amsterdam ngu Train vs. Ezinye Iindlela Travel
Ukuhamba ngemoto usuka eParis usiya eAmsterdam ngokungathandabuzekiyo a elihle drive. kunjalo, oko kwenza kuphela ingqiqo ukuba uyakwazi ukulihlawula ixesha kwaye siqinisekile ngokwaneleyo ukuba uzulazule iindlela phakathi kwezi zixeko zibini.
Kungakhathaliseki ukuba bathathe apho kwindlela wena yakho uhambo imoto ukusuka eParis ku Amsterdam, kukho motorways, Itholi, yaye amafutha ukuba bacinge. I drive singathatha ukuya ku 6 iiyure, okungcono; ngoko kuza kufuneka ukuba isicwangciso ima yakho abanye. kwakhona, liqwalasele isevisi zokubasa efunekayo endleleni, kwakunye ikhefu lelantshi. Bonke abo iinkcitho Ndongeze phezulu.
Mhlawumbi bacinga ukuthatha ibhasi kuba uye weva loo nto indlela engambi ukuba ahambe aye Amsterdam ukususela eParis. Nangona oku kuyinyaniso, i uhambo uya kuthatha phantse 7 iiyure. Nantso ixesha elide ukuba endleleni. Uya kuziva nokuba elide kuba nawe emzini ku ibhasi nge nandawo yaneleyo ukuhambahamba.
Kukwakho ke ukhetho ukubhabha ukusuka eParis Amsterdam. Kodwa ngoxa flight iya kuthatha kuphela kweyure kwaye 15 imizuzu, ayiboneleli ngee-perks ezifanayo nokuhamba emhlabeni. Ngaphandle kokuba ukuba in First Class, uya kufumana ngokwakho ahlohla ihlalisa moya ntofontofo.
Kukwakho Akukho elihle ubuhle European ukuba ngokwenene xa behamba moya. Useza kakhulu kuba amafu ngaphandle ukuba ukujonga ukuba kwenzeka ukuba ukwisitulo isihlalo window; ngenye indlela, unokukholosa on an ku-flight movie ukuba uhlale bangenisa. Kwaye musa ukulibala nakuba ukuhamba ngenqwelomoya nto kuthiwa ndlela fastest ukufika Amsterdam ukususela eParis, usafuna ukuyicazulula ixesha nemali ukuba kuza kuthatha ukuya kwisikhululo.
Intuthuzelo kunye nokuLula kweParis ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
Xa kuziwa ekuhambeni ukusuka eParis ukuya eAmsterdam, Ukuhamba ngololiwe ngoololiwe bakaThaks banikezela okona kulungileyo emhlabeni. Oku kunjalo ndlela ingenankathazo lula ukuhamba kubulelwe ukuqeqesha-high speed. Ungajikeleza uloliwe ngokulula ngaphandle kokuqonda ukuba iyashukuma.
Uya kuziva ukhuselekile xa uhamba ngololiwe, nisazi akuyi ukwaba iindlela umendo kunye abaqhubi ngokungakhathali. Kwaye ngesantya 300 km ngeyure, ufike indawo ekuyiwa kuyo kubini ixesha bekuya kuthabatha ngemoto okanye ngebhasi. oololiwe-High speed angakhona ku Amsterdam ukususela eParis 3 iiyure kwaye 19 imizuzu. Kwaye ngokungafani nokuhamba ngenqwelomoya, uya kuba i emaphandleni okumangalisayo European ukonwabela.
Incwadi amatikiti etreyini wakho kwangethuba, kwaye unako reyithi zibiza, ekwenziweni bekuhamba ukuqeqesha ukhetho eyongayo ngakumbi xa uhlela.
Ngokuhamba nge Thalys Uqeqesha, uyakwazi ukuthenga amatikiti ukuya ku 90 kwiintsuku ngaphambi komhla yakho zohambo ugcine ukuya ku 75% kwi amatikiti etreyini ukuba bebeka izihlalo zakho ekuqaleni.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys amacebiso trainjourney Tranride oololiwe traintip tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train uhambo ngololiwe Travel travelamsterdam traveltips